Na nchikota na "Eziokwu banyere ikpe Savolta", nke Eduardo Mendoza | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Nchịkọta na "Eziokwu gbasara ikpe Savolta", nke Eduardo Mendoza dere
Encarni Arcoya | | Akwụkwọ, Akwụkwọ
Eduardo Mendoza bipụtara akwụkwọ ya "Eziokwu banyere okwu Savolta" n’afọ 1975. Enwere ike ịtụle akwụkwọ a dị ka mmalite nke akụkọ dị ugbu a. N'ime akwụkwọ nyocha a, na-ajụghị iji usoro nnwale, Mendoza na-enye arụmụka nke na-adọrọ uche onye na-agụ ya.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ihe akwụkwọ a bụ, gaa n'ihu gụọrọ anyị ihe a nchịkọta dị mkpirikpi banyere "Eziokwu banyere okwu Savolta"nke Eduardo Mendoza dere. Ọ bụrụ, n’aka nke ọzọ, ị na-eme atụmatụ ịgụ ya n’oge na-adịghị anya, ọ ga-aka mma ịkwụsị ịgụ ebe a. Rịba ama nke ga-ekwe omume nbibi!
1 Ihe omume kachasị dị mkpa n'akwụkwọ a
1.1 Nkwupụta sitere na Javier Miranda
1.2 Ogbugbu nke Savolta
1.4 Ọnwụ nke Lepprince
2 Nchịkọta nke Eziokwu banyere ikpe Savolta ikpe site n'isiakwụkwọ
2.1 Isi nke akụkụ mbụ
2.2 Isi nke abụọ
3 Ihe odide ndi putara na Eziokwu banyere ikpe Savolta
3.1 Ndị gentry
3.2 Middle klas
3.3 Klas ndị na-akwụ ụgwọ ọrụ
3.4 Mgbasa ozi
3.5 Lumpen mgbasa ozi
Ihe omume kachasị dị mkpa n'akwụkwọ a
"Eziokwu banyere okwu Savolta" bu ihe omuma banyere ihe ojo nke aỌnọdụ mmekọrịta ọha na eze na nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Barcelona n'etiti 1917 na 1919 (Lee ihe ndaba na taa!). Ọrụ ahụ, nke na-elekwasị anya na mmasị ya na ibé ahụ, gụnyekwara usoro ọhụụ na stylistic.
Ọzọ, anyị ga-achịkọta nkenke ihe na-eme n'akụkụ ọ bụla dị iche iche nke akwụkwọ.
Nkwupụta sitere na Javier Miranda
Ọ bụ ezie na onye na-akọ akụkọ a dị na akwụkwọ akụkọ a bụ Javier Miranda, onye na-agba akaebe na ihe ndị ahụ, enwerekwa akwụkwọ ndị enyere na usoro ikpe. Nkwupụta nke onye ahụ dere n’ihu ọkàikpe na New York na 1927, bụ onye e depụtaghachiri ihe ndị o dere, na-enye ihe ọmụma dị oké mkpa.
Ogbugbu nke Savolta
Paul-André Lepprince bụ onye France nke mmalite dị omimi nke kwere nwa nwanyị Enric Savolta nkwa ma banye n'ụlọ ọrụ aka ha, ebe ọ na-ezube ire ere ndị German na iwu akwadoghị n'oge Agha Worldwa Mbụ. N'oge na-adịghị anya, Enric Savolta ga-anwụ na mwakpo ebubo nke ndị na-eyi ọha egwu site na mmegharị ọrụ.
N'ezie, Lepprince bụ onye nyere iwu ka e gbuo Savolta, n'ihi ụjọ nchọta yana n'ihi na ọ dị njikere ịchịkwa ụlọ ọrụ ya. Javier Miranda, onye nwere nnukwu mmasị na Paul-André Lepprince na ọ maghị mmejọ mpụ ya, ga-abụ onye a tara ahụhụ: Lepprince gwara ya ka ọ lụọ María Coral, nwa agbọghọ na-egosi na ọ bụbu onye hụrụ ya n'anya nye ya ọkwá dị elu; ọ bụ mgbe ọ chọtara eziokwu ahụ na mkparịta ụka nke a na-akọ na akụkụ dị nkenke nke akwụkwọ ahụ.
Ọnwụ nke Lepprince
Lepprince egbuola ma rara ya ụlọ ọrụ Savolta, mana njedebe nke agha ahụ kpalitere enweghị ego ụlọ ọrụ aka. Mgbe ọ nwesịrị ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị dara ada, Lepprince nwụrụ n'ụzọ ihe omimi.
Mgbe Lepprince anwụọla, Commissioner Vázquez na-agwa Javier Miranda mpụ ya. N’oge na-adịghị anya, akwụkwọ ozi sitere n’aka Lepprince ruru Miranda bụ ebe ọ gwara ya na ya etinyela mkpuchi ndụ ka nwunye ya na nwa ya nwanyị nwee ike ịnakọta ya mgbe obere oge gachara, ka ọ ghara ịkpalite enyo. Mgbe afọ ole na ole gasịrị, Miranda na-agba mbọ ilekọta ụgwọ ahụ. Akwụkwọ akụkọ ahụ ji akwụkwọ ozi ekele sitere n'aka María Rosa Savolta, nwanyị di ya nwụrụ nke Lepprince mechie.
Nchịkọta nke Eziokwu banyere ikpe Savolta ikpe site n'isiakwụkwọ
Akụkọ banyere Eziokwu banyere ikpe Savolta site n'aka Eduardo Mendoza nwere ike kewaa ụzọ abụọ, nke ọ bụla n'ime ha n'isi dị iche iche ebe ihe mere na, dị ka onye na-agụ, ị ga-echeta n'oge akụkọ ahụ dum.
Ya mere, anyị ga-eme ka ị bụrụ isi site na isi nchikota ka i wee mara ebe ihe niile anyị kwuru n’elu na-ewere ọnọdụ.
Isi nke akụkụ mbụ
Akụkụ mbụ mejupụtara isi ise. Onye ọ bụla n’ime ha dị mkpa n’onwe ya, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị ga-arapara n’otu, anyị ga-ekwu na nke mbụ bụ isi. Nke a bụ n'ihi na ọ bụ ebe a na-eme ka anyị mata ndị edemede na ndapụta ebe onye ọ bụla nọ. N'ezie, ana m akwado ka ị nwere akwụkwọ n'aka iji dee ha ebe ọ bụ na ha dị ole na ole ma ọ nwere ike ịbụ ntakịrị ihe mgbagwoju anya.
N'isi 1, na mgbakwunye na izute ndị odide ahụ, ị ​​ga-enwekwa ụfọdụ ntụaka na usoro nke, n'oge ahụ, ị ​​gaghị ejikọ, ma ọ bụ chee na ha nwere ezi uche. Ihe niile dị mgbagwoju anya ma jikọta oge gara aga na ugbu a.
Na nchịkọta, nchịkọta nke isiakwụkwọ a ga-adị nkenke: N'ihi edemede nke Lepprince, onye isi ụlọ ọrụ Savolta, na-agụ na Voice of Justice, ọ na-ezute otu nwoke. Ọ na-eme nke a site n'aka ụlọ ọrụ iwu Cortabanyes, nke metụtara ụlọ ọrụ Savolta, na ebe Javier Miranda na-arụ ọrụ. N'ebe ahụ ha chọpụtara na e nwere egwu iyi egwu na ụlọ ọrụ ahụ wee kpebie ịkpọ ndị ọjọọ abụọ inye ndị isi ihe atụ.
Na mgbakwunye, enwere oriri nke Afọ Ọhụrụ, na ịwụ elu nke anyị na-ahụ nkwupụta ya na ụdị izizi nke ihe ndị ahụ.
Isi nke 2 bụ nke kachasị dị mkpirikpi, ma na-ekwu maka isiokwu abụọ: n'otu aka, ajụjụ nke abụọ nke Javier Miranda; na nke ọzọ, usoro sitere na njirimara oge gara aga nke anyị na-ahụ ihe ọrụ ya dị, mmekọrịta ya na "Pajarito", ya na ọnwụ dị ịtụnanya nke Teresa na Pajarito.
Isiakwụkwọ na-esonụ na-agwa anyị ọzọ banyere oge gara aga, banyere olee otú Javier Miranda si bụrụ "enyi" nke onye njikwa Savolta, ezigbo ọbụbụenyi ọ rụpụtara n'oge dị mkpirikpi a ... Ma, n'ezie, ọ na-elekwasị anya na njedebe nke nnọkọ oriri na ọ yearụ yearụ nke afọ, mgbe onye okike na onye isi nduzi nke Savolta gbagburu ya na nnọkọ oriri nke ya na n'ihu onye ọ bụla nọ ebe ahụ.
Isi nke isi, isi nke anọ, na-enye anyị ntakịrị echiche n'ihi na, ọ bụ ezie na anyị ga-enwe usoro dị iche na isi akụkọ, ọ na-agbaso atụmatụ nke ihe na-eme mgbe ọnwụ nke ọchụnta ego ahụ gasịrị, otu Lepprince, enyi njikwa Miranda, si abịa. na dome nke ike, ọrụ ndị o nwere, na omume dị iche iche ọ na-arụ iji hụ na onweghị onye ga-ewepụ ya site na ebe ahụ.
N'ikpeazụ, isi nke ise, na-ekwu banyere nyocha ndị uwe ojii, otú o si esochi Lepprince na Miranda anya, na onodu nke ihe odide abuo a: otu na elu, nke ozo na agabiga onodu ojoo.
Akụkụ nke abụọ nke akụkọ a nwekwara ike kewaa ụzọ abụọ, n’otu aka, isi ise mbụ; na nke ọzọ, ise gara aga.
N’isi ise nke mbụ enwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkọ atọ nke ọzọ na nke na-akọ akụkọ banyere mkpụrụ edemede atọ: nke mbụ, Javier Miranda na otu o siri lụọ María Coral (na mgbakwunye na ihe niile na-eme); nke abụọ, nnọkọ ebe Lepprince bi na otu o si edozi nsogbu na ụlọ ọrụ ya (nke enweghị ego) yana ndị nwere oke (otu n'ime ha dị ezigbo mkpa); na nke atọ, nke mere ka anyị laghachi n’oge gara aga, na-akọ akụkọ banyere onye akaebe nke hụrụ ọnwụ Pajarito, na-eme ka ọtụtụ isi ihe doo anya site n’akụkụ bu ụzọ.
N'ikpeazụ, Isi nke ikpeazu na-akọ ihe niile na-eme ya na ndi odide. Ọ bụ ụzọ nke ijikọ ntụpọ na nke ọ bụla n'ime ndị odide ahụ kwụsị, ụfọdụ nwere oge ọdachi, ndị ọzọ adịchaghị.
Ihe odide ndi putara na Eziokwu banyere ikpe Savolta
Ugbu a na ị maara isi site n'isi nchịkọta nke ihe na-eme n'akụkọ ihe mere eme nke Eduardo Mendoza, anyị achọghị ịhapụ gị na-ezughị isi protagonists. Agbanyeghị, anyị agaghị elekwasị anya n'ihe odide (nke ị hụchararịrị), kama kama na klaasị mmadụ na-anọchi anya ya n'isi niile. Buru n'uche na anyị na-ekwu maka Barcelona ebe enwere ọtụtụ ọkwa mmekọrịta.
Ha bụ ndị odide ahụ nwere nnukwu mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọgaranya, dị ike ... N'okwu a, ihe odide na Eziokwu banyere ikpe Savolta ndị ga-abanye na klaasị a bụ ndị na - ekenye ya na ndị njikwa, dịka ọmụmaatụ n'onwe ya Savolta, Claudedeu, Pere Parells ... Maka nke a, ịhịa aka, na-eme ihe na-enyeghị ha mmachi ọbụlagodi (ọbụlagodi mgbe ha matara na ihe ha na-eme adịghị mma), wdg. ọ bụ na mbụ.
Ma ọ bụghị naanị ụmụ nwoke, ndị di na nwunye nke ihe odide ahụ na-emetụta ọhaneze, n'agbanyeghị, na nke a, ọ dị ka «nwa nwanyị nwa ite», ya bụ, ha gbagọrọ agbagọ n'ihe ụmụ nwoke ahụ kwuru ma na-eche naanị maka "Pretend "na ọha mmadụ.
Banyere ndị na-etiti etiti, ndị kacha anọchi anya ya ndị isi, ma ọ bụ ndị na-elekọta ọrụ nhazi na ikpe…, mana n'otu oge ahụ enwere obi abụọ ma ihe ha na-eme ọ dị mma ma ọ bụ na ọ bụghị. Iji maa atụ, onye ọkaiwu Cortabanyes ma ọ bụ ndị uwe ojii na-amụ ikpe ahụ.
Klas ndị na-akwụ ụgwọ ọrụ
Na akwụkwọ akụkọ a, mkpokọta bụrụ naanị ihe akaebe banyere ihe na-eme n'akụkọ ihe mere eme niile, na ha na-atụ egwu na ọ nwere ike ịgba ha aka n'ụzọ na-adịghị mma. Dị ka ị ga - asị "kwụọ ụgwọ ọbọgwụ ahụ."
Ka anyị kwuo na ọ bụ ọkwa kachasị dị ala nke ọnọdụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ha bụkwa mkpụrụedemede na, agbanyeghị na ha anaghị etolite (n'ihi na ode akwụkwọ lekwasịrị anya na bourgeoisie nke dị n'elu), enwere ụfọdụ nke pụtara ntakịrị.
Lumpen mgbasa ozi
N'ikpeazụ, n'ụdị a, anyị nwere ike ịsị na enwere ndị odide ahụ nwere ọnọdụ dị ala karịa nke gara aga, nke bụ, n'ụzọ ụfọdụ, ajuju n'ihi ihe ha mere, ọ bụrụ ịgba akwụna, ịbụ ndị ọchọ okwu, wdg.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Nchịkọta na "Eziokwu gbasara ikpe Savolta", nke Eduardo Mendoza dere
Onyinyechi Chi Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke La boca del diablo